टीकटक बनाउन लाग्दा सेतिमा हेर्दा हेर्दै ख’सेपछि ! विबाह गरेको ५ दीनमै टीकटकले लियो ज्यान - dautarimedia.com
टीकटक बनाउन लाग्दा सेतिमा हेर्दा हेर्दै ख’सेपछि ! विबाह गरेको ५ दीनमै टीकटकले लियो ज्यान
टिकटक बनाउने क्रममा सेती नदीमा ख’सेर एक किशोरी बेपत्ता भएकी छन् । शुक्लागण्डकी नगरपालिका–८ लालिमकी १९ वर्षीया पवित्रा लम्साल बेपत्ता भएको इलाका प्र’हरी कार्यालय बेल चौताराले जनाएको छ ।
शुक्लागण्डकी नगरपालिका–८ पुलचोकस्थित सेतीनदी किनारमा रहेको रक गार्डेनमा टिकटक बनाउने क्र’ममा उनी ख’सेर बे’पत्ता भएकी हुन् । लम्सालको ५ दिन अगाडी मात्र बिबाह भएको थियो । उनि र उनका श्रीमान दुवै जना दुरान फर्काउनको लागि माइतमा आएका थिए ।
आफ्ना दुई साथीसँग घुम्नका लागि पुलचोक गएकी लम्सालको न’दीमा ख’सेर बेप’त्ता भएपछि अहिले स्थानीयवासी र नेपाल प्रहरीको सहयोगमा खो’जी भइरहेको इलाका प्र’हरी कार्यालय बेल चौतराका प्र’हरी निरीक्षक ज्ञानबहादुर खड्काले जानकारी दिए ।
घुम्ने क्रममा साथीहरुसँग टिकटक बनाउन नदी छेउमा रहेको ढुङ्गामा उभिएकी लम्साल अचानक चि’प्लिएर नदीमा ख’सेको उनीसँगै गएका साथीहरुले बताएको उनले बताए । लम्साल अचानक चि’प्लिएर नदीमा ख’सेपछि उनका साथीहरुले प्रहरीलाई खबर गरेपछि त’त्कालै खो’जी कार्यमा खटिएको उनले जानकारी दिए । भिडियो सहीत
Previous: काठमाडौंमा बस्ने ३६ वर्षीय रुसिल कटुवाल पक्राउ
Next: संखुवासभामा ६ जनाका हत्या गर्ने लोकबहादुरको एक पछि अर्को कर्तुत बाहिरिदै